दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी कलाकार निशा ३ बर्षमै यस्तो दर्दनाक अवस्थामा,देखेर नरुने को होला र ? – Classic Khabar
June 12, 2021 276
दुर्घटनामा परेर निकै दर्दनाक अवस्थामा पुगेकी कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेको उद्दार भएको छ । उनले उपचार पाउने भएकी छन् । नर्भिक अस्पतालले उनको उपचारको जिम्मा लिँदै घरवाट उद्दार गरेको छ । नर्भिक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी उनको घरमै एम्बुलेन्स लिएर गएर उद्दार गरेकी हुन् ।
अरुका कुरा सुनेर आँसु पनि खसाउँछिन् । दुर्घटना भएको केही समय सम्म भारतकै अस्पतालमा उपचार गरिएको भएपनि आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने भएपछि उनलाई घरमै ल्याएर राखिएको थियो । आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर उनी अर्धचेत जस्तै घरमा थिइन् । तीन वर्षअघि भारतको देहरादूनमा भएको सडक दुर्घटनामा उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । भारतमा उपचार खर्च निकै महङ्गो भएपछि कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकले छोरीलाई नेपालमै ल्याउने निर्णय गरे ।
काठमाण्डौंको ट्रमा सेन्टरमा तीन महिनाको उपचार र त्यसपछि चिकित्सकहरुको सल्लाहमा उपत्यकाका विभिन्न थेरापी सेन्टरहरुमा नियमित थेरापी गरियो । थेरापीको निम्ति अर्थ अभावसँगै संक्रमण बढेपछि घरमै राखिएको थियो । उनको दयनीय शारीरिक अवस्थाबारे नवजीवन परोपकार समाजका सञ्चालक दुर्गानाथ दाहालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि नर्भिककी प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले चासो राख्दै उपचारको प्रबन्ध र उध्दारको व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।
Prevकमाउन गएका छोरा पा`गल भएर घर फर्किए ,८० बर्षिय आमाले अरुको घरमा काम गरेर छोराछोरी पाल्दै ,कठै यस्तो छ अवस्था (हेर्नुस् भिडियो )
Nextतपाईले हेर्न चाहेको भिडियो, सविताको श्रीमानको पहिलो श्रीमतीकी दाजु भाउजु मिडियामा (भिडीयो हेर्नुस)
यसरि हिलोमा ल,ट्पटिने जोडी को हुन ? खुल्यो यस्तो हर,कत गर्नुको रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)